၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း တစ်နိုင်ငံလုံး ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိရန် ဆောင်ရွက်နေဟုဆို | Akonthi
၂၄ နာရီအတွင်း နိုင်ငံတစ်ဝန်း ဖြစ်ပွားခဲ့သော မှုခင်းများ (၅၃၃)
ကွတ်ခိုင်မြို့ အ၀င်အထွက် မရှိတော့ဘဲ ဒေသခံများ စိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေ
နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲကြောင့် ကွတ်ခိုင်မြို့နယ် မန်လွယ်နှင့် နိမ့်ခိုင်တံတားကြားတွင် ပိတ်မိနေသူများ အစာရေစာပြတ်လပ်နေ
အကုန်သိသတင်းဌာန၏ သတင်းများကို တစ်ပုဒ်လုံးဖြစ်စေ၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်စေ ကူးယူဖော်ပြခြင်းများ လုံးဝ ခွင့်မပြုပါ။ ကူးယူဖော်ပြပါက တရားဥပဒေအရ တရားစွဲဆို အရေးယူပါမည်။
20 Aug 19
ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီစနစ်တွင် တစ်ပါတီတည်း အာဏာရနေခြင်းသည် မကောင်းဟု ဦးမျိုးရန်နောင်သိန်းပြော
တံတားဟောင်းတွေ ပြုပြင်နေရတဲ့အတွက် ဆုံးရှုံးနစ်နာရတယ်
ရွေးကောက်ပွဲနီး၍ ပါတီသန့်ရှင်းရေးလုပ်နေခြင်းမဟုတ်ကြောင်း NLD ပါတီမှ ဒေါက်တာမျိုးညွန့်ဆို
NLD ပါတီ(တနင်္သာရီတိုင်း)မှ ဘဏ္ဍာရေးမှူး၊ ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံနှင့် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်တို့အား ပါတီတာဝန်မှ ရုပ်သိမ်း
“ ပြည်သူ့ဘတ်ဂျက် ကျွန်တော်တို့မခိုးဘူး” ဟု NLD ပါတီဝင် ကိုမျိုးရန်နောင်သိန်း ပြော
မကွေးတိုင်းအတွင်း လုံခြုံရေးအတွက် စစ်ဆေးရေးဂိတ်များထားရှိစစ်ဆေးနေ
တိုက်ပွဲ၌ မည်သည့်ဘက်ကကျဆုံးသည်ဖြစ်စေ နိုင်ငံအတွက်နစ်နာကြောင်း NLDပါတီမှ ဒေါက်တာမျိုးညွန့်ပြော
စီးပွားရေးတိုးတက်မှသာ ပြည်သူများ၏ အခွန်ထမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းတိုးတက်လာမည်ဖြစ်ကြောင်း ဒဂုံမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ပြော
NLD ပါတီ ဗဟုသုတေသနဌာန အတွင်းရေးမှူး ဦးမျိုးရန်နောင်သိန်းအား ပါတီတာဝန်​များ ရပ်​ဆိုင်း
18 Aug 19
နိုင်ငံသားအားလုံး တန်ဖိုးရှိသည့် လူသားများဖြစ်စေချင်ကြောင်း နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြော
တရားမ၀င် ကုန်သွယ်မှုသည် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အဓိကအဟန့်အတားဖြစ်နေကြောင်း ဒုသမ္မတ (၁) ဦးမြင့်ဆွေပြော
တပ်မတော် အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ ပိုများလာဟု အဝေးရောက် အစိုးရအဖွဲ့ ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဒေါက်တာစိန်ဝင်းပြော
ဂုတ်တွင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုဖြစ်စဉ်၌ တပ်နှင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၁၂ ဦး၊ အရပ်သား ၂ ဦးသေဆုံး
15 Aug 19
နည်းပညာတော်လှန်ရေး၏ ဆိုးကျိုးများကိုလည်းမမေ့သင့်ကြောင်း နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြော
အာဏာပါဝါအသုံးချပြီး NLD ရုံးတည်ဆောက်ခြင်းမဟုတ်ကြောင်း ချင်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ဒုဥက္ကဋ္ဌ ပြော
14 Aug 19
မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးခရီးစဉ် အရှိန်အဟုန်ခေတ္တရပ်တန့်သည့်ကာလဖြစ်ကြောင်း ဦးကိုကိုကြီး ပြော
13 Aug 19
“ရန်ကုန်မြို့ရေကြီးနစ်မြုပ်မည်”ဆိုသောခန့်မှန်းချက်ကို မကြောက်ကြောင်း ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန် ပြော
ရန်ကုန်မြို့တွင်းရှိ ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင် ၅၀၀ အဆင့်မြှင့်တင်မှု ရာနှုန်းပြည့်နီးပါးပြီးစီး
“အခုဆိုရင် စီးပွားရေးကဦးမော့လာပြီ” ဟု NLD ပါတီဝင် ကိုမျိုးရန်နောင်သိန်း ပြော
ငါးဈေးကွက်ကို စနစ်တကျပုံဖော်နိုင်အောင် ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ ဦးဖြိုးမင်းသိန်းပြော
သစ်တောပြုန်းမှုကာကွယ်ရန်ရွာပေါင်း ၂၅၀ နီးပါးသို့ (E-Free)မီးဖိုအခမဲ့ ဖြန့်ဝေ
12 Aug 19
ရန်ကုန်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရင်းနှီးမြှပ်မယ်ဆိုရင်အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုလို့ဦးဖြိုးမင်းသိန်းပြော
25 Jul 19
အုန်းသီးခြောက်နဲ့ လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများပြုလုပ်ပြီး စီးပွားဖြစ်နေတဲ့ မိသားစု
နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ် မူးယစ်ဆေးဝါးပြဿနာများ ဖြေရှင်းရေးကောင်မတီ BLO အစည်းအဝေးပွဲ
ရန်ကုန်မြို့ကို နေချင်စဖွယ်မြို့တော်ကြီးဖြစ်လာစေရန် စည်ပင်မှအစွမ်းကုန်ဆောင်ရွက်နေဟု ဆို
15 Jul 19
လျှပ်စစ်မီး၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်ဖို့ ဘတ်ဂျက်တိုးမြှင့်လျာထား
တောင်သူများ သီးနှံအထွက်ကျဆင်းသည့်ဂယက်ကြောင့် သရက်ချဉ်ရောင်းအားကျဆင်း
တစ်ပတ်အတွင်း စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း ကျပ် ၃ ဘီလျံကျော်ကျဆင်း
၁၀၀၀၀ ရင်းပြီး ၄ ဆ အမြတ်ဝင်ငွေကို မှိုစိုက်ပျိုးခြင်းဖြင့် ရရှိနိုင်
ဗီယက်နမ်နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ မြန်မာ့ပြောင်း တင်ပို့သည့် ဈေးကွက်ချဲ့ထွင်သွားမည်
22 Jun 19
ယခုနှစ်နွေစပါး အထွက်နှုန်းကောင်းပေမဲ့ တောင်သူများအခက်အခဲကြုံ
18 Jun 19
မြို့နယ် ၅ ခုက တိုက်ခန်းများ အရောင်းအဝယ်သွက်နေ
ဘုရင့်နောင်ဆန်ကုန်စည်ဒိုင်သို့ ဆန်ဝင်ရောက်မှု ထက်ဝက်ကျော်ကျဆင်း
ဘယ်ဘက်ကနိုင်နိုင်ရှုံးရှုံး စစ်ပွဲဆိုတာမကောင်းပါဘူး လို့ဆိုလာတဲ့ သားညီ
အနုပညာရှင် ၁၀၀ ကျော် ဘောလုံးပြိုင်ပွဲလုပ်မယ်လို့ ကိုဝေမင်းမောင်ပြော
ရေဘေးသင့်သူတွေအတွက် နှင်းဆီအဖွဲ့ ဘာတွေလုပ်ဆောင်ကြမှာလဲ
စနစ်ကကောင်းတယ် ရှင်းရှင်းပြောရင် လူတွေက မကောင်းတာ
အလှမယ်ဆိုတာနဲ့ လှပနေဖို့ထက် သူများထက် အသိဥာဏ်ပိုကြွယ်ဝရမယ်
ရေဘေးသင့်ပြည်သူများကို ကျေးဇူးရှင်မိဘများအဖြစ် လူကြမ်းမင်းသားကြီး အောင်ခိုင် ခိုင်းနှိုင်းပြော
ကျားကျားကြိုက်ကြိုက် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီး အမှတ်တရကိုယ်စီ ရှိခဲ့ကြတယ်
မြန်မာနိုင်ငံ ကပ်ဘေးတွေသင့်နေပြီ၊ အဲဒါကြောင့် ဘုရား၊ တရားလက်ကိုင်ထားသင့်ပြီ
ငတ်နေတယ်ဆိုပြီး သိက္ခာကို ရိက္ခာနဲ့ မလဲကြပါနဲ့ လို့ သရုပ်ဆောင်ဖိုးတာ ဆို
ထမင်းရှင်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တဲ့အပေါ် ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးက အလှူငွေပေးအပ်
အနုပညာရပ်နားထားတဲ့ ဇာတ်ပို့/ဇာတ်ရံ တွေအတွက် ဖြေရှင်းပေးတဲ့ ၀ါဝါအောင်
မင်းသားတစ်ယောက်ရဲ့ ဖိနပ်ဖိုးလောက်တောင် ဇာတ်ပို့ကြေးမရ
ရေဘေးသင့်သူတွေအတွက် အလှူခံပေးတဲ့ အဆိုတော်စိန်လင်းနဲ့ ပိုးကြာဖြူခင်
17 Aug 19
ရေဘေးသင့်သူတွေအတွက် မေတ္တာသုတ် ရွတ်ပြီးဆုတောင်းပေးတယ်လို့ ထွန်းထွန်း ပြော
ရန်ပုံငွေဘောလုံးပြိုင်ပွဲမစသေးဘူး၊ အငြင်းအခုံတွေနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်နေပြီ
ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက် ပိုက်ဆံရှိတဲ့သူတွေဘက်က ကူညီစေချင်
ကပ်ဆိုးဆိုက်ရောက်နေတာကြောင့် ဘုရား/တရားမမေ့ကြဖို့ ၀ါဝါအောင် တိုက်တွန်း
ဇာတ်ကားတိုင်း အကယ်ဒမီမှန်းထားတာမရှိဘူး လို့ ဆိုလာတဲ့ နေတိုး
ကျည်ဆံထိမှန်ထားသော ရွာသား (၂)ဦးအား သွားရောက်ခေါ်ဆောင်သည့် ဂရုဏာလူမှုကယ်ဆယ်ရေး ကားများအပစ်ခံရ
အသက် ၆ နှစ်အရွယ် သမီးအရင်း၏ မိန်းမအင်္ဂါအား လက်ဖြင့်နှိုက်သည့် ဖခင်ကို အရေးယူထား
ဆီသိုလှောင်ကန်းအတွင်း ဆီဖြည့်နေစဉ် ပိုက်ခေါင်းပြုတ်ထွက်ရာမှ ဆီဘောက်ဆာယာဉ် မီးလောင်မှုဖြစ်ပွား
ဖခင်က ၁၉ နှစ်အရွယ်သမီးအရင်းအား အဓမ္မပြုကျင့်ရန် အကြိမ်ကြိမ်ကြံစည်မှုဖြစ်ပွား
ထိုင်းနိုင်ငံသားနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသား ၃ ဦးထံမှ ကျည်ဆံများဖမ်းဆီးရမိ
၆၄ နှစ်အရွယ်အမျိုးသားက ၄ နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေးအား မုန့်ဖိုးပေးပြီး အဓမ္မပြုကျင့်မှုဖြစ်ပွား
လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင် ၅ ဦး၏ သေနတ်ဖြင့်ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး စိုးရိမ်ရဒဏ်ရာများရရှိ
သူငယ်ချင်းများ အရက်သောက်ရာမှ စကားများရန်ဖြစ်ကာ ဓားဖြင့်ခုတ်သတ်မှုဖြစ်ပွား
အိမ်သာတက်ရန်သွားသည့် အမျိုးသားတစ်ဦးအပေါ် ခြံစည်းရိုးအုတ်တံတိုင်းပြိုကျ သေဆုံး
အရည်အသွေးမြင့် စိတ်ကြွဆေးပြားများစွာ ဖမ်းဆီးရမိတဲ့ ဖြစ်စဉ်
ဘရိတ်ပေါက်သွားသော ၆ ဘီးယာဉ်က လမ်းတစ်လျှောက်ရှိ ကား၊ ဆိုင်ကယ်များနှင့် ဈေးဆိုင်များကို ၀င်တိုက်
လားရှိုးလူငယ်များလူမှုကူညီရေးအသင်း ဥက္ကဌပါ ၂ ဦး လက်နက်ကြီးထိမှန်၍ သေဆုံး
ခရီသည်ထံမှခြိမ်းခြောက်ငွေတောင်းယူသူ အငှားယာဉ်မောင်းနှင့်အပေါင်းအပါတစ်ဦးကို ဖမ်းဆီးအမှုဖွင့်ထား
16 Aug 19
ငွေလာအပ်သူ၏အကောင့်ကိုအသုံးပြုကာ ရည်းစားထံကျပ်သိန်း ၂၀၀၀ ကျော်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည့် ဧရာဝတီဘဏ်စာရေးကို ဖမ်းဆီးရမိ
ဘုရားဖူးယာဉ်တစ်စီးအရှိန်မထိန်းနိုင်ဘဲ တိမ်းမှောက်မှုကြောင့် ၁ ဦးသေဆုံး၊ ၈ ဦးဒဏ်ရာရ
ဂုတ်တွင်းရဲစခန်းနှင့်တံတားတို့တိုက်ခိုက်ခံရမှုမှ အရေးကြီးလူနာများကို ပြင်ဦးလွင်ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ထား
စစ်အေးခေတ် လက်နက်စာချုပ်မှ နုတ်ထွက်ခဲ့ပြီးနောက် အမေရိကန်က တာလတ်ပစ် ဒုံးတစ်စင်း စမ်းသပ်ပစ်လွှတ်
သံတိုသံစကောက်သူက သံလမ်း အောက်ခံပြားနဲ့ ၀က်အူတွေ ဖြုတ်ခိုးခဲ့တာကြောင့် ရထား လမ်းချော်မှုဖြစ်
ဆူပူအုံကြွမှုတွေအတွင်း မီးရှို့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့ ပါပူအာ အကျဉ်းထောင်တစ်ခုမှ လွတ်မြောက်အကျဉ်းသား ၂၅၀ ကျော်ကို အင်ဒို ရဲတပ်ဖွဲ့ လိုက်လံရှာဖွေနေ
မိန်းကလေးတွေအတွက် ငရဲတွင်းလိုဖြစ်နေတဲ့ ကလေးသူငယ်လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှု အဆုံးသတ်ဖို့အင်ဒို လွှတ်တော်အမတ် တိုက်တွန်း
လက်နက်မှုဖြင့် ထိုင်း ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီး ပရမ်ချိုင်း ထောင် ၆ လ ထပ်တိုးကျ
ဟောင်ကောင်အပေါ် တိန့်အန်မင် ဖြိုခွင်းမှုမျိုးလုပ်လာခဲ့ရင် ကုန်သွယ်ရေးဆွေးနွေးမှုတွေ ထိခိုက်နိုင်ဟု တရုတ်ကို ထရန့်သတိပေး
၁၀ လအတွင်း ဆယ်ကျော်သက် မိန်းကလေး ၇ ဦးလောက်ကို အဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့မှုဖြင့် တရုတ်အမျိုးသားတစ်ဦးကို စင်ကာပူတွင် တရားစွဲ
စပါးစ်ကစားသမား အဲရစ်ဆင်အတွက် ရီးရဲအသင်း နောက်ဆုံးအကြိမ် ကမ်းလှမ်းမှုပြုလုပ်မည်
ကျောင်းသားတွေ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရမှုအတွက် ပါပူအာပြည်နယ် ပါလီမန်အဆောက်အအုံကို ဆန္ဒပြသူတွေ မီးရှို့
ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးကို တံစဉ်နဲ့ တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ စစ်သွေးကြွတစ်ဦးကို အင်ဒိုရဲက ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီး
ရေထဲ မစင်ပါ ဝမ်းရောဂါပိုး များလွန်းနေသဖြင့် မသန်စွမ်း သုံးမျိုးစုံ ကမ္ဘာ့ဖလား ရေကူးပွဲစဉ် ဖျက်သိမ်းလိုက်ရ
လူ ၆၀ ကျော်သေခဲ့တဲ့ အာဖဂန် မင်္ဂလာဆောင် အသေခံဗုံးခွဲမှု ၄င်းတို့ လက်ချက်ဟု အိုင်အက်စ် ထုတ်ပြန်
ထိုင်းမှာ ဗင်ကားနဲ့ ကုန်တင်ကား တိုက်မိကာ လာအိုနိုင်ငံသား ၁၀ ဦး အပါအ၀င် ၁၁ ဦးသေဆုံး
အစားအသောက်မှာထားတာကြာလို့စားပွဲထိုးကို သေနတ်နဲ့ ပစ်သတ်ခဲ့သူ
နယ်စပ်ကို ဖြတ်ကျော်ဖို့ လုပ်တဲ့ ပါလက်စတိုင်း လက်နက်ကိုင်တစ်စုကို အစ္စရေးစစ်တပ်က ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့် သုံးဦး သေဆုံး
ငှက်ပျောခိုင်တွေအကြား ရောနှောင်မှောင်ခိုသွင်းလာတဲ့ ကိုကင်းတွေ ဘူလ်ဂေးရီးယားမှာ တွေ့ရှိ
အာဖဂန် မင်္ဂလာဆောင်တစ်ခု အသေခံဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်ခံရလို့၆၃ ဦးသေ ၂၀၀ နီးပါး ဒဏ်ရာရ
ကက်ရ်ှမီးယားမှာ ကာဖျူးထုတ်ထားမှု ချက်ချင်း ရုပ်သိမ်းဖို့OIC က အိန္ဒိယ အစိုးရကို တောင်းဆို
ကံဆိုးစရာတွေ ကုန်စင်နိုင်ချေရှိတဲ့ ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများ (ရုပ်သံ)
၂၄ နာရီအတွင်း နိုင်ငံတစ်ဝန်း ဖြစ်ပွားခဲ့သော မှုခင်းများ (၅၃၂)
အခက်ခဲပြဿနာများ ပြေလည်သွားမယ့်ကာလကို ရောက်နေတဲ့ တနင်္လာသားသမီးများ
ယူနီကုဒ်က ယူနီဖေါင်းဖြစ်တာပေ့ါဆိုတဲ့ အကယ်ဒမီ လူမင်း (ရုပ်သံ)
မင်းသမီး လုပ်စားမယ့်သူ မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ မထက်(Pop Soul)
၂၄ နာရီအတွင်း နိုင်ငံတစ်ဝန်း ဖြစ်ပွားခဲ့သော မှုခင်းများ (၅၃၀)
တိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာ ဘယ်သူသေသေ နိုင်ငံနစ်နာတယ် - ဒေါက်တာမျိုးညွန့်(ရုပ်သံ)
ပြည်တွင်းပြည်ပ သတင်းကောင်းများစုစည်းတင်ဆက်မှု(ည ၈ နာရီရုပ်သံ)
၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း တစ်နိုင်ငံလုံး ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိရန် ဆောင်ရွက်နေဟုဆို
၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာအနေဖြင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းရရှိရန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေ ကြောင်း လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနမှ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းခိုင်က ပြောသည်။
တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအနေဖြင့် ဓာတ်အားလိုအပ်ချက်သည် တစ်နှစ်လျှင် ၁၉ ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်နေသည့်အတွက် မဂ္ဂါဝပ် အားဖြင့် ၃၀၀ မှ ၅၀၀ ကြားလိုအပ်ချက်ရှိနေကြောင်း သိရသည်။
“လျှပ်စစ်မီးမရရှိသေးတဲ့ ကျေးရွာတွေကအများကြီးကျန်သေးတယ်။ ဒါကို အစိုးရက စီမံကိန်းရေးဆွဲပြီးတော့ လျှပ်စစ်ဓာတ် အား ပေး စက်ရုံတွေ တည်ဆောက်ပေးတယ်။ ပြီးတော့ အသစ်တွေ့ရှိထားတဲ့ နေရာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ အဲဒီကနေလည်း လျှပ်စစ် ကို လုံလုံလောက်လောက်ပေးနိုင်ဖို့အတွက် စီမံကိန်းတွေရေးဆွဲနေပါတယ်။ ရေးဆွဲထားတဲ့ စီမံကိန်းအတိုင်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်နေပါတယ်” ဟု လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနမှ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းခိုင်က ပြောသည်။
လက်ရှိအခြေအနေတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်နိုင်မှုမှာ မဂ္ဂါဝပ် ၃၈၀၀ ခန့်ရှိသော်လည်း တိုးတက်လာမည့် ဓာတ်အား လိုအပ်ချက်အရ ၃၀၀၀ မဂ္ဂါဝပ်ခန့် ထပ်တိုးထုတ်လုပ်ရန် စီစဉ်နေကြောင်းလည်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အိမ်ထောင်စုပေါင်း ၁၀ ဒသမ ၈ သန်းကျော်ရှိပြီး၂၀၁၉ ခုနှစ်မတ်လအထိ အိမ်ထောင်စုပေါင်း ၄ ဒသမ ၇ သန်း ကျော် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ကာ ၆ ဒသမ ၁ သန်းကျော် ဓာတ်အားစနစ်မှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိရန် ကျန်ရှိ နေသေး ကြောင်း သိရသည်။
၂၀၁၉ ခုနှစ်အကုန်တွင် တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းသော အိမ်ထောင်စုများ လျှပ်စစ်မီး ရရှိရန် ရည်မှန်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လတွင် တစ်နိုင်ငံလုံး အိမ်ထောင်စုအားလုံး၏ ၅၅ ရာခိုင်နှုန်းကျော်အား ဓာတ်အားစနစ်မှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရရှိရေးကိုလည်း စီမံဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ၅၅ ရာခိုင်နှုန်း၊ ၂၀၂၆ ခုနှစ်တွင် ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းအထက်နှင့် ၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်တွင် တစ်နိုင်ငံလုံး လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရရှိရေးနှင့် ပြည့်ဝစွာ သုံးစွဲနိုင်ရေးကို အလေးထားဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
၂၀၁၉ ခုနှဈအတှငျး တဈနိုငျငံလုံး ၅၀ ရာခိုငျနှုနျး လြှပျစဈဓာတျအား ရရှိရနျ ဆောငျရှကျနဟေုဆို
၂၀၁၉ ခုနှဈအတှငျး တဈနိုငျငံလုံး အတိုငျးအတာအနဖွေငျ့ လြှပျစဈဓာတျအား ၅၀ ရာခိုငျနှုနျးရရှိရနျ ကွိုးပမျးဆောငျရှကျနေ ကွောငျး လြှပျစဈနှငျ့ စှမျးအငျဝနျကွီးဌာနမှ ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဦးဝငျးခိုငျက ပွောသညျ။
တဈနိုငျငံလုံးအတိုငျးအတာအနဖွေငျ့ ဓာတျအားလိုအပျခကျြသညျ တဈနှဈလြှငျ ၁၉ ရာခိုငျနှုနျးတိုးတကျနသေညျ့အတှကျ မဂ်ဂါဝပျ အားဖွငျ့ ၃၀၀ မှ ၅၀၀ ကွားလိုအပျခကျြရှိနကွေောငျး သိရသညျ။
“လြှပျစဈမီးမရရှိသေးတဲ့ ကြေးရှာတှကေအမြားကွီးကနျြသေးတယျ။ ဒါကို အစိုးရက စီမံကိနျးရေးဆှဲပွီးတော့ လြှပျစဈဓာတျ အား ပေး စကျရုံတှေ တညျဆောကျပေးတယျ။ ပွီးတော့ အသဈတှရှေိ့ထားတဲ့ နရောတှလေညျး ရှိပါတယျ။ အဲဒီကနလေညျး လြှပျစဈ ကို လုံလုံလောကျလောကျပေးနိုငျဖို့အတှကျ စီမံကိနျးတှရေေးဆှဲနပေါတယျ။ ရေးဆှဲထားတဲ့ စီမံကိနျးအတိုငျး လြှပျစဈဓာတျအား ရရှိအောငျ ဆောငျရှကျနပေါတယျ” ဟု လြှပျစဈနှငျ့ စှမျးအငျဝနျကွီးဌာနမှ ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဦးဝငျးခိုငျက ပွောသညျ။
လကျရှိအခွအေနတှေငျ လြှပျစဈဓာတျအား ထုတျလုပျနိုငျမှုမှာ မဂ်ဂါဝပျ ၃၈၀၀ ခနျ့ရှိသျောလညျး တိုးတကျလာမညျ့ ဓာတျအား လိုအပျခကျြအရ ၃၀၀၀ မဂ်ဂါဝပျခနျ့ ထပျတိုးထုတျလုပျရနျ စီစဉျနကွေောငျးလညျး သိရသညျ။
မွနျမာနိုငျငံတှငျ အိမျထောငျစုပေါငျး ၁၀ ဒသမ ၈ သနျးကြျောရှိပွီး၂၀၁၉ ခုနှဈမတျလအထိ အိမျထောငျစုပေါငျး ၄ ဒသမ ၇ သနျး ကြျော လြှပျစဈဓာတျအား ရရှိခဲ့ပွီးဖွဈကာ ၆ ဒသမ ၁ သနျးကြျော ဓာတျအားစနဈမှ လြှပျစဈဓာတျအားရရှိရနျ ကနျြရှိ နသေေး ကွောငျး သိရသညျ။
၂၀၁၉ ခုနှဈအကုနျတှငျ တဈနိုငျငံလုံးရှိ ၅၀ ရာခိုငျနှုနျးသော အိမျထောငျစုမြား လြှပျစဈမီး ရရှိရနျ ရညျမှနျးဆောငျရှကျလကျြရှိပွီး ၂၀၂၁ ခုနှဈ မတျလတှငျ တဈနိုငျငံလုံး အိမျထောငျစုအားလုံး၏ ၅၅ ရာခိုငျနှုနျးကြျောအား ဓာတျအားစနဈမှ လြှပျစဈဓာတျအား ရရှိရေးကိုလညျး စီမံဆောငျရှကျလကျြရှိကွောငျး သိရသညျ။
၂၀၂၁ ခုနှဈတှငျ ၅၅ ရာခိုငျနှုနျး၊ ၂၀၂၆ ခုနှဈတှငျ ၇၅ ရာခိုငျနှုနျးအထကျနှငျ့ ၂၀၃၀ ပွညျ့နှဈတှငျ တဈနိုငျငံလုံး လြှပျစဈဓာတျအား ရရှိရေးနှငျ့ ပွညျ့ဝစှာ သုံးစှဲနိုငျရေးကို အလေးထားဆောငျရှကျလကျြရှိကွောငျး သိရသညျ။
Aug 20, 2019/0
ရှမ်းပြည်နယ် ကွတ်ခိုင်မြို့တွင် ဒေသခံများ မြို့ပြင်သို့ အ၀င်အထွက် မရှိတော့ဘဲ စိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေကြောင်း ဒေသခံတစ်ဦးမှ အကုန်သိသတင်းဌာနသို့ပြောသည်။
တပ်မတော်နှင့် မြောက်ပိုင်း လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေသည့်အတွက် ရှမ်းပြည်နယ် ကွတ်ခိုင်မြို့နယ် မန်လွယ် နှင့် နိမ့်ခိုင်တံတားကြားရှိ ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးတွင် အိမ်စီးကားများ ပိတ်မိနေပြီး ကားများတွင် ပါလာသူများမှာလည်း အစာ ရေစာပြတ်လပ်နေပြီဖြစ်ကြောင်း မေတ္တာရှင်လူမှုကူညီရေးအသင့် (နမ့်ဖက်
ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်တွင် တစ်ပါတီတည်းကသာ အာဏာရနေခြင်းသည် ကောင်းသည့်လက္ခဏာမဟုတ်ကြောင်းနှင့် ပြိုင် ဆိုင် မှုမရှိပါ အာဏာရှင်ဆန်လာလိမ့်မည်ဟု NLD ပါတီ ဗဟိုသုတေသနဌာန အတွင်းရေးမှူးအဖြစ်မှ ရပ်ဆိုင်းခြင်းခံခဲ့ရသည့် ဦးမျိုး ရန်နောင်သိန်းက ပြောသည်။
Aug 19, 2019/0
တံတားဟောင်းတွေ ပြုပြင်နေရတဲ့အတွက် ဆုံးရှုံးနစ်နာရတယ်လို့ တံတားဦးစီးဌာန အင်ဂျင်နီယာချုပ် ဦးဝင်းမင်းထွဋ် ပြော
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီ(တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး)မှ ဘဏ္ဍာရေးမှူး၊ ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံနှင့် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်းတို့အား ပါတီတာဝန်မှ ရုပ်သိမ်းလိုက်ကြောင်း ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
ရွေးကောက်ပွဲနီး၍ ပါတီသန့်ရှင်းရေးလုပ်နေခြင်းမဟုတ်ဘဲ ပါတီဝင်များ၏ အရည်အသွေးကို စဉ်ဆက်မပြတ် စောင့်ကြည့်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(NLD) ပါတီမှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဒေါက်တာမျိုးညွန့်က ပြောသည်။
ရန်ကုန်အပါအဝင် မြို့ကြီးငါးမြို့ ရေအောက်နစ်မြုပ်သွားမည်ဟု အင်္ဂလန်မိုးလေ၀သအဖွဲ့ အစည်းကို ကိုးကား၍ ဒေါက်တာထွန်းလွင် သတိပေး
သမ္မာန်စာနှစ်ခါဆင့် ခေါ်ပြီး မလာပါက လက်ထိပ်နှင့် ခေါ်ရမည်ဟု နိုင်ငံတော်သမ္မတပြော
29 Jul 18
ဗီယက်နမ်တွင် မယားကြီးက မယားငယ်ဖြစ်သူကို လမ်းမပေါ်ဆွဲခေါ်ကာ ကိုယ်လုံးတီးချွတ်၍ ငံပြာရည်၊ ငရုပ်သီးမှုန့်များဖြင့်လောင်းချခဲ့
15 Jun 18
ဇနီးဖြစ်သူ အိမ်ပေါ်မှ ဆင်းသွားချိန်၌ ခင်ပွန်းက သမီးအရင်းအား အကြိမ်ကြိမ်အဓမ္မပြုကျင့်မှု ဖြစ်ပွား
01 Jun 18
အပျိုဟု လိမ်ပြောတဲ့ ရည်းစားကို သတ်ကာ မိမိကိုယ်တိုင်လည်း အဆုံးစီရင်သွားခဲ့တဲ့ MMA ဖိုက်တာ
30 May 18
ကျောင်းတွင် ဆက်နေလိုပါက သမီးရည်းစားမထားရန် ကျောင်းသား/သူများအား သတိပေးထားကြောင်း TTC ကျောင်းအုပ်ကြီးပြော
ခံစစ်မှူး ဗာရာနီကို ဆုံးရှုံးခဲ့ပါက ကူဘာလီကို အစားထိုးခေါ်ယူရန် ရီးရဲအသင်း စိတ်ဝင်စားနေ
ပြင်သစ် ပင့်ကူလူသားက ဟောင်ကောင် မိုးမျှော်တိုက်တစ်လုံးကို တက်ကာ ငြိမ်းချမ်းရေး အလံချိတ်ဆွဲ
ဘာသာ၊ သာသနာပျောက်ဆုံးပါက နိုင်ငံနှင့်လူမျိုးပါပျောက်မည်ဟု ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး(ငြိမ်း)ဦးစိုးမောင် ပြော
ဟောင်ကောင်လွှတ်တော်တွင် အမတ်များအကြား လက်သီးဖြင့် ဖြေရှင်းသည်အထိ သဘောထားတင်းမာနေ ၊ အမတ်တစ်ဦး ဆေးရုံရောက်
မြန်မာ့အမွေအနှစ်ပုဂံဟာ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် ပူးပေါင်းထိန်းသိမ်းသင့်
စစ်အစိုးရဆန့်ကျင်ရေး အမွေအနှစ် “ တက္ကသိုလ်ထဲ ရဲမဝင်ရ ” ဥပဒေကို ဂရိ အာဏာရပါတီက ဖျက်သိမ်းရန် ပြင်ဆင်နေ
အကုန်သိသတင်းဌာန၏ သတင်းများကို ၀င်ရောက်ဖတ်ရှုပေးမှုအတွက် အထူးပင် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Akonthi News Media
We are internet based news media and will be always updating the news in Myanmar and included world wide. Especially we will launch Hot & Breaking news of daily updates. Please keep in touch with us for your daily news.
Your can contact for your special news.
© Copyright 2017-18 & All right reserved.